Soo dhowow - Xulka barafka 31 Agosto
Welcome to new season - August 31st
New season - Arabic
Hada waxaa dib loo bilaabayaa hockeyga barafka, tababarka ama tareeninka koowad wuxuu bilaabmayaa 31 Agosto.
Waxaa cusub sanadkaan in gurubka la dhaho Lejonen ay tababarka yeelanayaan asbuucii labo jeer, laakiin qofkii raba in uu tareeneeyo waqtiyo intaa ka badan wuxuu la xiriirayaa tusaale ahaan iskuulka hockeyga.
Macluumaadka la xiriira xiliga iskuulka uu bilaabmayo waxey ku imaaneysaa imeylka, waxaa la rabaa in laga soo jawaabo si loo ogaado inta kasoo qayb galeysa. Taasina waxay sahleysaa in macalimiinta ay kutalagal fiican oo xiiso leh ay sameeyaan.
Waxan raaceynaa talooyinka ay soo jeediyeen hayada caafimaadka iyo ururka hockeyga barafka.
Waxaa muhiim ah in la is caawiyo si wadajir ah oo la xasuusnaado talooyinka muhiim ka ah sida, in la kalafogaado, in gacmaha la dhaqdo iyo in la isticmaalo alkoholka gacmaha iwm.
Sidaas daraadeed waxaa idinka codsaneynaa idinka waalidka ah in aad ku ekaataan oo fadhiisataan kuraasta meeesha ciyaarta laga fiirsado ama banaanka isbartiibada aad ku sugtiin caruurtiina inta tababarku socdo.
Waxaa u baahanahay caawimaada waalidka cidii gacan nasiineysa oo wax ka hogaamineysa tareeninka.
Cidii rabta in ay na caawiso waxay u sheegeysaa oo ay akhbaar gelineysaa hogaamiyiyaasha meesha jooga markaas.
Soodhawaada baa idin leenahay hadii aan nahay Göteborg HC.